မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) – သမိုင်း၊ သမိုင်းဆိုတာက ကြောက်စရာ | MoeMaKa Burmese News & Media
အောင်သဇင် ● ငြိမ်းချမ်းရေးကို ပိတ်ဆို့တားဆီးနေတဲ့ ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်
သုအိုက်စံ ● ရှေ့တန်းပြန်
စိုင်းညွှန့်လွင် ● ဘာတွေ ဖြစ်နေကြတာလဲ ...
ကွန်ကရစ်တောထဲက သားကောင်၊ လှောင်ချိုင့်ထဲက ချိုးငှက် အပိုင်း (၅)
ကိုသန်းလွင် - လမ်းလေးခွ
ခင်မောင်စော (ဘာလင်) - မြန်မာ့ရိုးရာ သင်္ချာကိန်းဂဏန်းများ
ကိုသစ် (သီတဂူ) ● စစ်တပ်မရှိသော တိုင်းပြည် (သို့) ကိုစတာရီကာ
မေငြိမ်း - မနေနိုင် မထိုင်နိုင်.. နိုင်ရာနီ
ရင်ဘတ်အဟောင်းကြီး ကလေးတွေကို တပ်မပေးနဲ့
ထင်အောင် - ကျွန်တော်ညှပ်ခဲ့ဘူးသော ဆံသဆိုင်များ
မင်းကိုနိုင် ● ပုံမပြောချင်ဘူး
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) – သမိုင်း၊ သမိုင်းဆိုတာက ကြောက်စရာ
(မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၅
သတင်းစကားစကြားကြားချင်းတော့ ခါတိုင်းလိုသမရိုးကျ၊ သို့လော သို့လော အာရုံ အလွှဲအပြောင်းသတင်း၊ ထွက်ပေါက် စိတ်ဖြေရာသတင်း၏၊ ပုံမှန်ထွက်နေကြ ပုံပြင်သတင်းလိုလို၊ ချုပ်ထိမ်း၊ ထိမ်းချုပ်နေတဲ့အောင်ပွဲရ အနိုင်ရပြည်သူနဲ့ မရှု မလှရှုံးနိမ့် တွေဝေ ငေးမှိုင်နေတဲ့ အရှုံးသမားအလယ် ခဲတလုံးပစ်ချလိုက်သည့်နှယ် လှိုင်းဂယက်ထန်ယုံဆိုလေး သက် သက်သာ ၊၊
သတင်းစထွက်ရာ လားရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ဘီဘီစီသတင်းဌာနကြီး၊ “မိုးလုံးပြည့် မုသားဝါဒသတင်းဖြန့်ချိရာဌာန “၊ “လေလှိုင်း လူသတ်လိုင်စင်ရ မီဒီယာသတင်းဌာန”၊ “အမုန်းတရားနဲ့ တဖက်သပ်ချနင်း နင်းချေတဲ့သတင်းဌာနရယ်လို့ နှစ် ပေါင်းများစွာ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ကောင်းချီးမင်္ဂလာပြုခံရတဲ့ သတင်းဌာနရဲ့သတင်းဇစ်မြစ်ဆိုတော့ ပြည်သူတွေအဖို့ ယုံရ ခက်ခက်၊ မယုံရခက်ခက် ၊၊
ဖယ်ဒရယ်နဲ့ခွဲထွက်ရေး စကားရပ်လို ဗလုံးဗထွေးရောနှောနေဆဲဆိုသလို ဘီဘီစီနဲ့ မိုးလုံးပြည့်မုသာဝါဒစကားရပ်ကား…မကွဲမပြား ရောနှောယှဉ်တွဲနေတာကတကြောင်း၊ အရာရာ အားဖြည့် အားစိုက်သတိထားနေရတာကလည်းတကြောင်း၊ ကြုံ ခဲ့ ဆုံခဲ့ လွဲခဲ့ ရင်နာခဲ့ရတာတွေ များခဲ့တာကတကြောင်း၊ အရာရာငြိမ်သက်နေဆဲ ခြင့်ချိန်တွေးတောနေဆဲ သက်ဆိုင်ရာနှစ် ဖက်စလုံး အတည်ပြု ဖွင့်ဟလိုက်တော့မှ .. သြော် ဒီလိုကိုး ….။
အတည်ပြုချက်နဲ့အတူ တုန့်ပြန်ရမယ့် ပြည်သူဖက်က သဘောထားကတော့ အေးစက်စက်၊ သတိဝီရိယအားစိုက်မှုက ထူး လို့ပိုမလား၊ မောင်ပိုနေမြဲ ကျားနေမြဲ .. စထွက်လာတဲ့သတင်းအစအနနဲ့အတူ … ဒီည သမိုင်းတွင်မယ့် ည …ဆိုတဲ့ စကားရပ် က အနာဟောင်းကို တုတ်နဲ့ဆွလိုက်သလို။
သမိုင်းအသစ်ကဗ္မည်းထိုးနိုင်ခဲ့ပြီ …. ဆိုတဲ့ ဆိုခဲ့တဲ့ သမိုင်းနဲ့ချီတဲ့ စကားလုံးတွေကြောင့် တွေဝေခဲ့ရ၊ လမ်းလွှဲခဲ့ရ၊ လမ်းချော်ခဲ့ ရ .. မိအေး အကြိမ်ကြိမ်နာခဲ့ရ၊ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်တွေနဲ့ ဖလှယ်ခဲ့ရ၊ ယုံကြည်ချက်တွေေ၀၀ါးခဲ့ရတာတွေ များလွန်းတော့လည်း ပြည်သူတွေအဖို့ နိုင်ငံရေးအမြင်ရေချိန်တွေ မြင့်တက်လာခဲ့ရတာကို မငြင်းနိုင်။
အာဏာရှင်စနစ်ကို ဖက်တွယ်နေသူများအဖို့ အကြပ်အတည်း၊ အကျဉ်းအကြပ် တခုခုကြုံရတိုင်း ပထမဦးဆုံးလက်ကိုင်စွဲ နေကြ တဲ့စကားလုံးက အမျိုးသားရေး အမျိုးသားရေးတာဝန် ဆိုတဲ့စကားရပ်ကို ယူယူသုံးနေကြ။
အာဏာရှင်စနစ်ကို အဓွန့်ရှည်ခံစား စံစားလိုသူများအဖို့ အခက်အခဲ့ဘေးအန္တရာယ်ရောက်လေလေ ဗျာများခြောက်ခြားလေ လေ ဒုတိယ လက်ကိုင်စွဲ ကာကွယ်ယူ သုံးစွဲနေမယ့်စကားလုံးက … ဥပဒေ အခြခံဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေ …ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မြိန်ရည်ယှက်ရည် ပြောနေကြ။
အာဏာရှင်စနစ်ကို အသေခံ အနာခံ မစွန့်လွှတ်နိုင်သူတွေအဖို့ ချောင်ပိတ်မိနေရင်း ထွက်ပေါက်မရှိ၊ သေရေး ရှင်ရေး အခက်ကြုံရလေလေ တတိယမြောက် လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြု အားထားတဲ့စကားလုံးတွေက … ထူးထူးခြားခြား၊ ဆန်းဆန်း ပြားပြား၊ တအံ့တသြ … စကားရပ်တွေပါပဲ။ အဲ့ဒီနည်းလမ်း ပုံသေနည်း ၃ ရပ်ကို ထည်လဲသုံးရင်း၊ အချိန်ဆွဲရင်း၊ သွေးခွဲရင်း ထွေပြားဂိုဏ်းခွဲလာတဲ့အထိ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ကြိုးလှန်ထား ချော့မြူကစားလာခဲ့တာ အစဉ်အဆက်ဆိုတော့ ပျဉ်ဖိုး နားလည်ခဲ့ရပါပြီလေ။
ယနေ့လက်ရှိပကတိအနေအထားက ရိုးရိုးရှင်းရှင်း။ တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့သဘောထားဆန္ဒအမှန်ကိုလည်း ဖော်ထုတ်ပြပြီးပါပြီ။ နိုင်ငံတကာကလည်း စောင့်ကြည့်ရုံနဲ့ မပြီး၊ လက်တွေ့သာဓကပြလိုက်တာက အနိုင်ရ အနိုင်ယူလိုက်တဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ရှေ့ သာမန်လူမဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသား ၅၀ ယောက်က တစုတပေါင်းထဲ လာရောက်တွေ့ဆုံ သြ၀ါဒခံယူပြီးပါပြီ။ လာရောက် ဂုဏ်ပြု ချီးမြှောက်ပါရစေလို့ လာခွင့်တောင်းတဲ့ သမတကြီးနဲ့ အရင်ဦးဆုံး အလည်အပတ်ခရီးအတွက် ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ် ထားတဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်တို့တတွေအကြား နောင်လာမယ့် ပဉ္စမ မြန်မာနိုင်ငံတော်သစ်ကြီးအတွက် နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းတွေ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ နည်းဗျူဟာတွေကို တကွက်ချင်း တကွက်ချပြ ထုတ်ရှိုးပြနေတော့ ထင်တလုံးနဲ့ အလွဲကြီးလွဲ အရှုံးကြီးရှုံး ခဲ့ရတဲ့ အယောင်ဆောင် စစ်အာဏာရှင်တစု အသက်ရှူမှား မေ့မျှောလုမတတ်၊ ပါးစပ်အဟောင်းသား အငေးသား၊ ခွန်းတုံ့ပြန်ဖို့ ဆိုစကားရှာမရ၊ ချာချာလည်နေတုန်း လာပါပြီလေ …ပေါ်လာပါပြီ။
နှစ်ပေါင်းများစွာ အသားကျ အသားသေအောင် ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့၊ အရာရာထောင့်စေ့ အကွက်စေ့ ပွဲပြီးမီးသေ အဆုံးစွန် ထိအောင် ကျကျနန ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေရဲ့ အရှင်သခင်ကြီး စာဖတ်လို့မရနိုင်တော့။ လက်ပိုက်ကြည့် နေလို့လည်း မဖြစ်ချေတော့။ သမိုင်းဝင်စာတစောင်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေးကြိုးဝိုင်းထဲ ပြန်ဝင်လာတာကိုလည်း ပြည်သူတွေက ထူးခြားပြီး ရင်မခုန်တော့။ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား သွေးမပူတော့ မောင်ပုံတယောက် စောင်းလည်းတီတတ် စောင်းကောက်လည်း လုပ်တတ်ပါပြီလေ။
အပေါ်ကဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း အကျဉ်းအကြပ်၊ ချောင်ပိတ်ကြံရာမရ၊ ထွက်ပေါက်ရှာမရ ချာချာလည်နေချိန် အာဏာရှင်အဆက် ဆက် သုံးစွဲနေကြအတိုင်း … အမျိုးသားရေးတာဝန်၊ တည်ဆဲဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီ၊ ထူးထူးခြားခြား ဆန်းဆန်းပြားပြား … စတဲ့ စကားလုံးတွေ ရောပြွမ်း ရေလဲသုံးရုံမက ဘာတွေများ ဘယ်လိုများ ကတိက၀တ်ပြုကြသလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိနိုင်။ ဘယ်အချက်တွေနဲ့ အလဲအလှယ် ဖလှယ်ခဲ့သလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှ မခန့်မှန်းနိုင်။ နောင်လာမယ့် အခင်း အကျင်း လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ် မူတည်ကောက်ချက်ချနိုင်တာကလွဲပြီး အာဏာရှင်တို့ရဲ့သွေးပျက် ခြောက်ခြားချိန်အခါ ပြောမိ ပြောခဲ့ ဆိုစမှတ်ရှိခဲ့တဲ့ ထူးထူးခြားခြား ဆန်းဆန်းပြားပြား စကားစုတခုကို ပြန်ပြောင်းသတိရမိပါရဲ့။
တချိန်က အတိန်က အာဖရိကရဲ့ သားသတ်သမားကြီး၊ ရက်စက်ကြမ်းကြတ်တဲ့ အကြွင်းမဲ့ အာဏာရှင်သခင်ကြီး ယူဒီအာ မင်ရဲ့ စကားစုလေးတခုပါ။ နေ့တနေ့ ညသန်းခေါင်ယုံအချိန် သူကိုယ်တိုင်ဦးဆောင် လက်ကိုင်တုန်အဖြစ် အထူး သီးသန့် ပျိုးထောင်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်အတွင်း မကျေလည်တဲ့ ပြဿနာတခုအတွက် အချင်းချင်းပစ်ကြ၊ ခတ်ကြ၊ အမြှောက် ထုကြ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ၀ရုန်းသုန်းကားဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် အဲဒီတပ်စခန်းရှေ့ကို အရောက်ပြေးရင်း ပြောထွက်လိုက်တဲ့ စကား ဒီမိုကရေစီဘိုးအေနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေတောင် မှင်သက်သွားခဲ့ ကမ္ဘာကျော်သွားစေခဲ့ရပါတယ်၊၊
ဟေ့ … မင်းတို့မကျေနပ်ရင် .. ငါ့ကိုမုန်းရင် …မင်းတို့ရှေ့က ငါ့ကို ပစ်သတ်လိုက်။ ပြည်သူတွေ အထိတ်ထိတ်အလန့် လန့်ဖြစ်အောင် တဒိုင်းဒိုင်း တဒိန်းဒိန်း မပစ်နဲ့ …။ အခု ငါ့ကိုလာသတ်လိုက်။ ပြည်သူတွေ အေးအေးချမ်း ချမ်းနေပါစေ ….။
Tags: မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ)
မောင်မောင်လတ်(ရွှေအင်းလေးစာပေ) – တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးခြင်း အပြီး …. (0)
မောင်မောင်လတ်(ရွှေအင်းလေးစာပေ) – ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျယ်ချုပ်ကလွတ် ပြီ လား..? (6)
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) မြို့လွိုင်လင်ကို….. သက်သေတည် (0)
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) ● ရေးခွင့် ရေးပိုင်ခွင့် ရှိတိုင်း ရေးကြမယ်ဆိုရင် … (0)
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) ● ဝက်သစ်ချပင်အောက်က မောင် (1)
One Response to မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) – သမိုင်း၊ သမိုင်းဆိုတာက ကြောက်စရာ
ထန်းရှိန်းလိန်း on November 28, 2015 at 3:32 pm